Evènements – Page 2 – Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche
siceva	 Oct 20, 2020
Andro maneran-tany iadiana amin’ny haromontana
SIC	 Sep 29, 2020
Ireo teboka sy lalan-tsaina ho fanatsarana ny lalam-pihariana jono
DEFIS, FORMAPROD et PROSPERER adoptent l’approche FBS et CBS.
SIC	 Juin 17, 2020
Niampy 106 isa ny teknisianin’ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono hanampy tosika ny tantsaha mpamokatra eo amin’ny tontolo ambanivohitra manomboka izao. Notolorana ny mari-pahaizana teknisianina momba ny fambolena sy…
SIC	 Juin 11, 2020
« Ronono ho an’ny rehetra, loharanon’ny fahasalamana » io no lohahevitra nentina nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny ronono ny 10 jona 2020. Manoloana indrindra ny fiadiana amin'ny valan’aretina COVID 19 izao , ny MAEP…
SIC	 Juin 10, 2020
« Fanavaozana maharitra ny ranomasimbe», io no lohahevitra avoitra mandritry ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny ranomasim-be amin’ity taona 2020 ity.Manana ny anjara toerany lehibe eo amin’ny fiainan’ny olombelona sy…
Le MAEP entérine les résultats de l’évaluation de la stratégie et du programme pays du FIDA et donne…
SIC	 Juin 6, 2020
Antananarivo, 4 Juin 2020 – Un atelier national s’est tenu ce jour pour finaliser l’accord conclusif de l’Évaluation de la stratégie et du programme pays (ESPP) du Fonds International du Développement Agricole à Madagascar effectuée…
SIC	 Mai 15, 2020
Nolanian’ireo solombavam-bahoaka ny talata 12 mai 2020 teny amin’ny CCI Ivato ny volavolan-dalàna laharana faha-010/2019 ny 28 novambra 2019 mifehy ny famokarana biolojika eto Madagasikara. Nambaran’ny Minisitry ny fambolena sy ny…
SIC	 Mai 4, 2020
Amperinasa ireo mpandidy vary nafarana avy any amin’ny Faritra Vakinankaratra miisa 1.098 izay efa voazaha ara-pahasalamana. Nanomboka ny zoma 1 mey no nihazo an’Alaotra ny andiany voalohany tamin’izy ireo. Tsara ny voka-bary ao…